Kaliya maahan Man United… Kooxo waa weyn ee Premier League oo raacda ugu jira adeega Sergio Ramos – Gool FM
(England) 20 Nof 2020. Sida laga soo xigtay wargeysyada, kooxaha ugu waa weyn ee horyaalka Premier League ayaa si aad ah u doonaya saxiixa daafaca Real Madrid ee Sergio Ramos, inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Xiddiga reer Spain ee Sergio Ramos ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Real Madrid wuxuu dhici doona xagaaga sanadka dambe taas oo keentay inay kooxo badan isku dayaan inay beeca xurta ah ku helaan adeegiisa.
Dhibaatada ka dambeysa qandaraaska Sergio Ramos ee Real Madrid oo aan weli dib loo cusbooneysiin ayaa ah in kabtanka uu doonayo inuu qandaraaska u kordhiyo ugu yaraan labo xilli ciyaareed, halka kooxda ay dooneyso inay qandaraaska u kordhiso hal xilli ciayaareed oo kaliya.
Haddaba shabakada “Goal” ayaa muujisay in Manchester United aysan ahayn kooxda kaliya ee England ka dhisan ee dooneysa inay lasoo saxiixato Sergio Ramos, laakiin taa bedelkeeda kooxaha waa weyn ee Premier League ayaa raadinaya xiddiga reer Spain.
Shabakadan caalamiga ah ee “Goal” ayaa sheegtay in kooxaha Liverpool, Arsenal, Chelsea iyo Manchester City iyo waliba Manchester United ay raadinayaan saxiixa Sergio Ramos.
Waxaa lagu soo waramayaa in dhamaan kooxahan waa weyn ee horyaalka Premier League ay xiriir la sameeyeen wakiilada Sergio Ramos, waxayna muujiyeen xiisaha ay u qabaan inay la saxiixdaan haddii uu go’aansado inuu ka tago Real Madrid.